Garowe oo weli wajahaysa caqabado kaga yimaadda isqaqabsiga dhulka. – Warbixinta Kalfadhiga 26aad – Kalfadhi
in Dowladda Hoose
Golaha deegaanka degmada Garowe ayuu maanta u furmay kalfadhigoodii 26naad, kaas oo ay kaga tashantaan hawlaha shaqo ee dowladda hoose, isla markaasna ay ku dejiyaan go’aannada masiiriga ah ee degmadda. Waa kulan sannadkiiba laba jeer dhaca.
Duqa degmada Garowe Axmed Siciid Muuse ayaa maanta golaha u sheegay horumaro ay ku talaabsadeen muddadii lixda bilood ahayd ee golahani jiray iyo in ay sameeyeen xiriiro dibedda ah oo waxtar u ah caasimadda.
Waxaase jirta in boobka iyo khilaafaadka dhulka oo mudo dheer ka soo taagnaa Garowe ayaa weli caqabad weyn ku yihiin hawlaha horumarinta ee degmada, sida uu sheegay gudoomiye Axmed Siciid.
Ka sokow dhulka shacabka isku haysto, waxaa qayb ka ah meelaha uu is qabqabsigu saamayeeyay dhulka dowladda “waxaa jira burcad caadaystay in ay dhulka dowladda isku dayaan in ay boobaan” ayuu yiri Duqu
Meelaha cusub ee ay degmadu ku fidayso ayuu sheegay gudoomiyuhu in ay doonayaan in ay ka sameeyaan dhul hanti guud ah, si xaafad walba u hesho meelo looga dhisi karo adeegyada muhiimka u ah sida iskuulada, goobaha caafimaadka, saldhigyada booliska iyo adeegyo kale.
Dowladda hoose ee magaaladu si buuxda gacanta uguma hayso dhulka mana bixiso, laakiin waxay awood u leedahay in ay sharciyayso isla markaasna waafajiso qorshaha magaalaynta ee ay iyadu hoggaamiso. Dadka ayaa inta badan dhulka hore u qabsaday waana sababta keenta is qabqabsiga.
Warbixinta duqa degmadu uu siiyay golaha deegaanka ee Garowe, wuxuu sheegay in dakhli ku filan oo adeegyada lagu fulin karo aysan degmada soo gelin isla markaasna ay dhowaan sameeyeen fursado cusub oo lagu heli karayo dakhli wax lagu qabto.
Golaha wakiillada Puntland oo wasiirka maaliyadda su’aalo ka weydiiyay miisaaniyadda
Wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland oo sheegtay in aysan fududaan doonin in la kala diro gole deegaan